नेपालमा कोरोना म’हा’मा’री कहिले नियन्त्रण हुन्छ ? यस्तो छ प्रम ओलीको ‘भविष्यवाणी’ – Jagaran Nepal
नेपालमा कोरोना म’हा’मा’री कहिले नियन्त्रण हुन्छ ? यस्तो छ प्रम ओलीको ‘भविष्यवाणी’
काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोना पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन फागुनसम्म कुर्नुपर्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साउनतिर कोरोना संक्रमणको दर ओरालो लाग्ने बताए । उनले विकसित देशहरुले पनि जनतालाई सडकमा लगेर राख्नुपरेको स्मरण गराए । ‘भेन्टिलेटरमा बस्नपर्ने अवस्थामा ल्याउनु नत्र भने हस्पिटलमा ठाउँ पनि छैन, नल्याउनु बिरामी । आइसोलेसनमा बस्नु भनेर विकसित देशहरुले पनि घर पठाउने स्थिति बन्यो,’ उनले भने, ‘हामीले अझ त्यस तहमा हात उठाइसकेका छैनौं ।’
उनले सम्बोधनको क्रममा ‘भगवान’को स्मरण पनि गरे । ‘अब भगवानको भरोसा छ, हामीबाट केही पनि हुनसक्दैन भनेर विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमुखले भनेको र लाचारी प्रकट गरेको हामीले देखेका छौं । हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको अनुमानमा नेपालमा कोरोना म’हा’मा’री नियन्त्रणको समयरेखा- हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं र अहिलेको अवस्थामा जस्तो मैले यहाँ आंकडाहरु सुनाएँ । पहिले जेठको महिनामा जुन आंकडाको स्थिति थियो, असारको पनि मैले १, २ र ३ गतेको सुनाएँ । त्यसले ७ हजारको आसपासमा तीन दिनमा, चैतदेखिको हेर्ने हो भने सात हजार पुग्छ । जेठको महिना मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढी पुग्छ दैनिक । त्यस्तो स्थितिमा अहिले अलि तल झरेको छ र हिजोको आंकडाअनुसार लगभग २ हजारमा झरेको छ । आउनेहरुको संख्या । यो ट्रेन्डलाई हेर्दा हामी साउनको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौं अथवा भदौको सुरुतिर ।
र, त्यसपछि ओरालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौं । तर, अर्को कुरा के छ भने हामीलाई पनि बुझ्नुपर्‍यो । हाम्रा आनीबानी पनि बुझ्नुपर्‍यो । हाम्रा संस्कार पनि बुझ्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडहरु आउँदैछन् । सधैं यी चाड रमाइला हुन्थे हाम्रा लागि । यसपल्ट यी चाडहरुले फेरि संक्रमण बढाउँछन् भन्ने पनि अवस्था छ । त्यसकारण यो खतराबाट हामी कति जोगिन सक्छौं ? यदि यो खतराले फेरि अलिकति हाम्रो ग्राफ बढाइदियो भने हामीले मंसिरमा फेरि ग्राफ अलिकति उँधो झर्दै गएको ग्राफचाहिँ फेरि अलिकति मास्थिर जानसक्छ । र, मंसिरको अन्तिमतिरबाट हामीले त्यस ग्राफलाई फेरि तल लान सक्छौं । र, पुष माघसम्ममा हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं । फागुनको महिना सम्भवतः नियन्त्रणको महिना हुन्छ ।
तर, हामीले संक्रमितहरुलाई आउन सहज ढंगले नदिने, भारतको सिमानाबाट ह्वारह्वार्ती नआउने स्थिति अथवा छिरेर कोही उम्केर जान नसक्ने स्थिति, त्यसबेलासम्म उपयुक्त क्वारेन्टाइनको पनि हामीले व्यवस्था गरिसक्ने अवस्था र बाहिरबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था, कोही पनि उम्किएर समुदायमा जान नसक्ने स्थिति त्यो बनायौं भने हामीले अहिलेसम्म हामीले गर्ने टेस्टिङ अथवा हामीले गर्ने संक्रमितहरुको गर्ने ट्रेस, यी सबै कुराहरुलाई हामीले उपयुक्त ढंगले गर्न सक्छौं ।
रियालिस्टिक ढंगले हामीले हेर्दा असोज कात्तिक यो पारो चाहिँ धेरै तल घटेर जाने अवस्था बन्छ । र, अहिले बढेपनि हामीले यसलाई साउनसम्ममा नियन्त्रण गर्न सक्छौं किनभने संक्रमितहरु आउने संख्याको कमि जसरी जुन मात्रामा भएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी त्यो देख्न सक्छौं ।